‘कोल्ड ड्रिङ्क्स’ को सट्टा दही, मही पिउनुहोस् स्वास्थ्यका लागि फाईदा हुन्छ : डा. अरुणा उप्रेती – Kavreonline
‘कोल्ड ड्रिङ्क्स’ को सट्टा दही, मही पिउनुहोस् स्वास्थ्यका लागि फाईदा हुन्छ : डा. अरुणा उप्रेती
अहिले त स्कुलको खाजामा पनि यस्ता खालको जुसको विज्ञापन रहेको हुन्छ । त्यसले पनि बालबालिकाको मनोविज्ञानमा असर गरेको हुन्छ ।जुस बनाउने ड्रममा कुहिएको फलफूल भेटियो भनेर पनि कहिलेकाहीँ आइरहेको हुन्छ । त्यसैले आमा बाबु पनि सचेत हुनु पर्छ ।
अर्जुन क्षेत्रीको गुरु आए मिडियामा, गरे अरुको भन्दा फरक कुराको खुलासा (पुरा भिडियो)